Sheekada filimka Naa Peru Surya: Allu Arjun wuxuu la yimid filim la daawan karo oo Action wacan leh – Filimside.net
Sheekada filimka Naa Peru Surya: Allu Arjun wuxuu la yimid filim la daawan karo oo Action wacan leh
Stylish Star Allu Arjun ayaa tiyaatarada Koonfur Hindiya loo baneeyay wuxuuna la yimid filimka Action-ka ah ee fariinta wadaninimo lagu lifaaqay NaaPeru Surya – NaaIllu India.
Jilaayaasha Filimkaan: Allu Arjun, Arjun Sarja, R. Sarathkumar, Anu Emmanuel, Boman Irani, Rao Ramesh, Vennela Kishore, Elli Avram
Qiimeynta sheekadiisa : 3/5 (Sedex xidig)
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 48-daqiiqo
Fariinta Filimka NaaPeru Surya Oo Kooban: Surya (Allu Arjun) waa askari mayal adag laakiin aan xakameyn karin xanaaqiisa ama carradiisa xad dhaafka ah taasina waxay sababeysaa in ciidanka laga ganaaxo ama shaqada laga joojiyo.
Surya (Allu Arjun) oo shaqada looga fariisiyay inuu gacanta la galay hawl uusan fasax u qabin ayaa lagu amraa inuu daaweyn dhanka maskaxda la talin ah soo qaato.
Waxaana lagu xujeynaa inuu shahaada dhanka dhimirka ah ee uu xanaaqiisa ku xakameyn karo kasoo qaato dhaqtarka dhanka la talinta iyo dhimirka qaabilsan Arjun.
Laakiin Surya (Allu Arjun) wuxuu la kulmaaa qoyskiisa oo 10-sano ka hor ugu dambeesay waxaana kusoo fur furmayaan arimo badan.
Haddaba Surya (Allu Arjun) ma xakameyn doonaa xanaaqiisa, ma wanaajin doonaa xariirka qoyskiisa kala dhaxeeyo sidoo kalena dib ma ugu soo laaban doonaa ciidamada si uu u guto waajibaadka qarankiisa inuu difaaco ka saaran.
Bandhiga Jilaayaasha: Allu Arjun wuxuu la yimid bandhigiisa ugu wanaagsanaa ebid si gaar ah doorkiisa xanaaqa badan sidoo kalena dareenka caadifada ah marwalbo u nugul. Dha ahaantii wuxuu la yimid door sanado badan lagu xasuusan doono sidoo kalena filimkaan siweyn ugu tiirsan yahay.
Inaba caadi ma ahan shaqada adag ee uu qabtay waa mid uu amaanteeda dib u helaayo madaama sameynta doorka filimkaan inuu Allu Arjun dhib badan u maray shaashada laga fahmi karo.
Arjun Sarja door adag oo siweyn loo diyaariyay ayuu filimkan ku leeyahay, sidoo kale Anu Emmanuel iyadana wey ka baxsatay filimkaan madaama door wacan la siiyay.
Dhamaan caawiyasha kale ee filimkaan Boman Irani, Rao Ramesh, Vennela Kishore, Thakur, Pradeep Rawat, Harish, Sai Kumar, Posani mid walbo door wacan ayaa la siiyay oo kaalintiisa muuqato.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka NaaPeru Surya:
Action-kiisa waa heer sare, bandhiga Allu Arjun, fariinta askarta iyo dareen qiiro badan oo uu leeyahay.
Muxuu Ku Liitaa Filimka NaaPeru Surya:
Qaybta dambe fariinta filimkaan oo aad adkeyn, sidoo kalena fariintiisa Action-ka ayaa xooga la saaray iyo tayeynta dooraka Allu Arjun taasi oo ka dhigtay filimkaan inuu yahay mid halmar la daawan karo.
Gunaanad: Director Vakkantham Vamsi qaybta hore filimkaan ama halka saac hore si heer sare ah ayuu isugu daba riday laakiin halka saac dambe xoogaa fariinta wuxuu ka dhigay mid dabacsan oo aan adkayn balse wuxuu ku nasiib badan yahay inuu helay Allu Arjun oo si taariikhi ah doorkiisa u matalay kana dhigay mashruucaan in la daawan karo adigoo Action wacan ka heleysid iyo bandhiga Allu Arjun.
Filimka NaaPeru Surya wuxuu noqon doonaa mashruuc guuleesto balse darada Hit dhameestiran inuu gaaro wey adkaan doontaa madaama fariintiisa mid adag ahayn laakiin uu yahay mashruuc la daawan karo kuna raaxeesan karaan taageerayasha Allu Arjun.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka NaaPeru Surya:
Waxaa Aqrisay 1,379